पेटको तल गर्भावस्था दुखाइ
सबैका लागि गर्भावस्थामा पेटको तल दुखाइ काट्न सक्दछ
महिला शरीरको लागि गर्भावस्थाको सर्त प्रकृतिले सबैभन्दा प्राकृतिक तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सैद्धान्तिक, महिला र सृजिएका महिलाहरू र सृजिएका बच्चाहरूलाई जन्म दिन र बच्चाहरूलाई जन्म दिन। तर हामी लगातार गर्भवती छैनौं ???? तसर्थ, एक महिलाको शरीर एक बच्चाको लागि नयाँ राज्यको साथ मास्टर गर्नु आवश्यक छ। र यो, यो हुन्छ, धेरै रमाईलो संवेदनामा जानको लागि।
गर्भावस्थाको क्रममा पेटको तल पीडाले एक महिलालाई डराउँदैन। तीखो, तर छोटो अवधिको दुखाइ, बच्चाले धिडेको तथ्यबाट हुन सक्छ।
अक्सर सामान्यतया म्यानरिज्म र खिसी वा कब्जको साथ जडानको पेटको तर्फमा दुखाइ हुन्छ। त्यसोभए एक महिलालाई शरीरको स्थिति परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिन्छ। उदाहरण को लागी, जब तपाईं सुक्खा, दायाँ पट्टि झुठो, दायाँ खुट्टा तान्छ, र आफ्नो घुडा मा बायाँ झुकाउन, छातीको घुँडा माथी थिच्नुहोस्। यस स्थितिको लागि एक स्थितिमा माटो।
<< p> त्यहाँ त्यस्ता पीडाहरू छन्, जुन आवधिक रूपमा हुन्छ र गर्भमा भग्नावशेषको कारणले आफैंको तयारीको कारणले हुन्छ। तब महिला सुत्न र आराम गर्नु पर्छ, र यदि गर्भपात गर्ने खतरा छैन भने, आराम गर्नको लागि डाक्टरहरूले न्यानो स्नान लिन सिफारिश गर्छन्।
<< p> पेटको तल दिउँसोमा दुखाइ उत्पन्न भयो जब छाती गुफामा पेटको गुफामा डायाफ्राममा पैतृक वा प्राकृतिक प्वालबाट खस्किन्छ। दु: ख हटाउन शरीरको स्थिति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, र शक्ति मोड स्थापना गर्न यसको उपस्थिति रोक्न आवश्यक छ। चट्टान हर्नियाले गर्दा हुने गम्भीर पीडाको साथ, एक जरुरी अपरेसन आवश्यक छ।
लगभग सबै पीडा गर्भावस्थाको समयमा उत्पन्न हुन्छ। तर यदि त्यस्ता पीडाहरू अति शक्तिशाली छन् भने, आवेगहरू वा रक्तस्रावको साथ पर्याप्त परामर्शको लागि आवश्यक छ।
यसको मतलब गर्भावस्था
मा पेटको तल दुखाइ हुन सक्छ<< p> तपाईंले गर्भावस्थाको अवधि एक महिलाको जीवन मा सबैभन्दा सुन्दर छ र एक महिला को जीवन एक महिला को सबै सुन्दर छ, र अधिक प्राकृतिक प्रक्रिया असम्भव छ। यो कसरी प्रकृति द्वारा राखिएको छ। तर जे भए पनि, गर्भावस्था भनेको हाम्रो जीवनको सानो हिस्सा मात्र हो र परिणाम स्वरूप - यो अवधि जहिले पनि महिलाको लागि साधारण हुँदैन र शरीरको एक विशेष संवेदनामा प्रकट हुन्छ।
गर्भावस्थामा धेरै महिलाहरू विभिन्न चरित्र र तीव्रताको दुखाइको दु: खमा हिड्छन्। गर्भावस्थाको बखत पेटको पेट वा उपन्यास दर्दको उपस्थितिको कुनै विवेकका मामिलाहरू छैनन्। जे भए पनि, यो जान्नु आवश्यक छ कि गर्भावस्थामा सबै पीडा आमा र बच्चाको लागि खतरनाक हुँदैन।
यो प्रायः काट्छ जुन काट्छ र अड्किन्छ, र कहिले काँही पेटको तनावमा कट्टरपन्थी अवस्थाको रूपमा देखा पर्दछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, विज्ञहरूले आफ्नो शरीरको होशियारीपूर्वक आफ्नो मुखलाई ध्यान दिएर सुनाउन र यसको उपस्थितिको आवृत्तिको निर्धारण गर्न सिफारिश गर्छन्, दुखाइ नियमित वा दोहोरिन्छ, वा आफैमा छिटो पुग्नुहोस्।
यदि दुखाइ रोकिएन भने, र कुनै थप लक्षणहरू उत्पन्न भएको छैन, सम्भवतः पीडा तनावको प्रतिक्रिया थियो र तपाईंले आराम र स्विच गर्न आवश्यक छ।
<< p> यो थाहा छ कि गर्भावस्थाको समयमा एक शेभावको उपस्थितिमा मूर्बी र सम्पूर्ण प्रणालीको साथ समस्याको साथ समस्या वा समस्याहरूको साथ। धेरैलाई थाहा छ कि प्रारम्भिक गर्भावस्थामा महिलालाई यो यूआर्वषको आवश्यकता छ, यो रगतमा हार्मोनहरूको एकाग्रता बढेकोले हो, तर मूभनिसको घटना समाप्त हुँदैन।
यसैले लामो अवधिको काटिएको पीडाको साथ बारम्बार र पीडादायी पेशाको साथ, विशेषज्ञलाई भ्रमण स्थगित नगरेको यो उत्तम हो किनकि ढिलाइले नकारात्मक रूपमाको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ आमा र भविष्य बच्चा।
कुनै केसहरू छैनन् जब दिदीहरूले ectopic गर्भावस्थाको उपस्थितिलाई संकेत गर्दछ। यस अवस्थामा, पीडा रक्तचाप र आन्तरिक रक्तस्रावमा एक धारिलो ड्रपको साथ। त्यहाँ एक चक्करहरु, पासो र चेतनाको क्षति छ। यस्तो अवस्था अत्यन्त खतरनाक हुन्छ र जीवनको लागत, त्यसैले त्यस्ता लक्षणहरूको साथ तुरून्त डाक्टरको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ।
गर्भावस्थाको बखत पेटको तल: जसको अर्थ हो
गर्भावस्थाको समयमा पेटको गम्भीरता महिलाहरू महसुस गर्न सक्दछ, दुबै प्रारम्भिक र पछि। भावना धेरै रमाइलो छैन, तर भविष्यका आमाहरू र उनीहरूका बच्चाहरूको लागि खतरनाक छैन। यद्यपि डाक्टरले यससँग सल्लाह दिनेछ ताकि उसलाई तपाईंको गुनासोहरू थाहा छ र आवश्यक छ भने मद्दत गर्न सक्दछ।
गर्भावस्था हप्ता पेट
को तल दुखाइ<
लगभग सबै गर्भवतीलाई गर्भाशयको टोन लाग्यो, जुन पहिलो पटक गर्भवती महिलाहरूबीच आतंकवादी डर मात्र नभई विचारहरूदेखि हो।
गर्भाशय टोन युटर मा प्राय: पीडाविहीन कटौती हुन्छ (यद्यपि कहिलेकाँही महिला हल्का पीडा महसुस हुन्छ)। अर्को शब्दमा, गर्भवती महिलाले पेटको फेदमा प्रकाशको स्प्रिमहरू सुरु गरे, जबकि यो पेट माउन्ट गरिएको छ।
त्यस्तै घटनाले महिलालाई हराउँछ, विशेष गरी उदाहरण। गर्भाशयको टोन निदान गर्ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के हुनुपर्दछ, किनकि यसको लागि यो बाहिरी निरीक्षणको लागि पर्याप्त छ।
प्राय: पेटको फेदमा दुखाइ प्रारम्भिक समयमा गर्भवती हुन्छन्। यदि यी दु: ख तीव्र छैन भने, त्यहाँ रगतको रगत र पाथोवको अन्य लक्षणहरू नियमको रूपमा नियमको रूपमा र कुनै पनि नियमको रूपमा नियमको रूपमा छैन। गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा पेटको तल दुखाइ महिला शरीरमा हार्मोनल पछाडिको कारण हुन सक्छ। गर्भाशयको द्रुत बृद्धिले र गर्भावस्थाको द्वेष देखा पर्न दु: ख देखा पर्न सक्छ, जब गर्भाशयले बच्चा जन्माउनेको लागि तयारी गरिरहेको छ।
हल्का प्रवृत्ति, गर्भावस्थाको बखत पेटको तलको दुखाइले धेरै महिलालाई ढिलो सर्तमा महसुस गर्दछ। यस अवधि प्रत्येक अवधि फरक छ।
कोहीले विश्वास गर्छन् कि यी तयारी संकुचन हुन्, अन्यले उनीहरूको गलत झगडालाई बुझाउँछन्। तर जे भए पनि, गर्भाशयले आगामी जन्मको लागि तयारी गरिरहेको छ।
र यदि केहि यस्तो तयारी गर्भावस्था को 39 35 हप्ता गर्भावस्था को लागी शुरू भयो, तब अन्य झूटा संकुचनहरू 320 हप्ताको साथ सुरू गर्न सकिन्छ - र यो सामान्य हो। समयको मुख्य कुरा सत्यबाट झूटा संकुचन भिन्न गर्न सिक्ने समयमा।
साथै, प्रारम्भिक संकुचनहरू प्राय: प्राथमिक महिला द्वारा याद गरिन्छ। गलत संकुचन सजिलै हटाउनुहोस् - गहिरो सास फेर्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्, यदि एक अवसर छ भने, तपाईं सुत्न सक्नुहुन्छ।
गर्भावस्थाको समयमा पेटको तल दुखाईको घटनालाई गर्वको अन्त्यको अन्त्यको लागि कारण सामान्य हो जुन लगभग सबै गर्भवती महिलाहरूले सामना गर्छन्। र यस्तो पीडाबाट कुनै खतरा छैन।
तर यदि पेटको तल दुखाइ लामो र लगातार हुन्छ, जबकि तिनीहरू योनीबाट गोरामको साथमा डाक्टरहरूलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।
विशेष गरी यदि गर्भवती महिलाको सर्तमा, र पीडा मात्र बढाइएको छ। केवल एक अनुभवी डाक्टरले आमा र बच्चाको लागि कसरी खतरनाक हुन्छ भनेर बुझ्न सक्दछ भनेर बुझ्न सक्दछ। अध्यायको रूपमा योनिबाट दु: खबाट दुखाइबाट दुखाइबाट दुखाइबाट दुखाइ र हरियो पारीहरू विचलित हुन सक्छन्, यी तेल तेल हुन्। र यस अवस्थामा तपाईले आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ।
प्राय: जसो बारम्बार र सामान्य दुखाइ पछाडि दुखाइ हो। तिनीहरूको तीखो अभिव्यक्तिहरू क्रमब्सको पर्खाइको पाँचौं महिनाको बारेमा भविष्य मामीलाई व्याकुल हुन थाल्छ। यो व्याख्या गर्न धेरै सजिलो छ। तथ्य यो हो कि मेरुदण्डमा लोड महत्वपूर्ण वृद्धि भयो, र पेटको मांसपेशीहरू, गम्भीर रूपमा कमजोर भएका छन्। यो पीडाले खुट्टामा "दिन" सक्छ, विशेष गरी यदि एक गर्भवती महिला खुट्टामा गयो भने।
यस्तो पीडादायी अभिव्यक्तिहरूसँग लडाईले तपाईंलाई खाना मद्दत गर्दछ, जसको आधार जुन कुनै पनि समयमा क्याल्सियम हुनेछ, जुन कुनै पनि समयमा र ठूलो मात्रामा। तपाईंको ख्याल राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, मेरुदण्डको सानो लोड गर्नुहोस्। यसका लागि यो सुत्न सम्भव छ ओर्थोपेडिक गद्दामा धेरै उपयोगी छ। र निस्सन्देह, गर्भवती महिलाहरूको लागि एरोबिकको बारेमा नबिर्सनुहोस्। एक्वा-एरोबिक्स तपाईको लागि धेरै उपयोगी हुनेछ। पहिले यो एक अस्तर हो, र दोस्रो, यसले मेरुदण्ड अनलोड गर्न मद्दत गर्दछ।
<< p> पछाडि चाँडोसम्मको हल्का दुखाइमा, तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। सायद तपाईसँग उदाहरणका लागि, कृषिको लागि। यदि हो भने, विशेषज्ञले तपाईंको लागि एक बीडेउन नियुक्त गर्नेछ, र पट्टी पनि सल्लाह दिनुहुनेछ। तर त्यस्ता परिस्थितिहरूमा यस्तो अवस्थामा एनेस्थेटिया हुन सक्दैन।
यस पृष्ठमा सब भन्दा लोकप्रिय पोष्टहरू र शीर्षकहरू "पेटको तल दुखाइमा दुखाइमा रहेको सब भन्दा लोकप्रिय पोष्टहरू र टिप्पणीहरू समावेश गर्दछ"। यसले तपाईंलाई छिट्टै प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईं छलफलमा पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ।
महिला शरीरको लागि गर्भावस्थाको सर्त प्रकृतिले सबैभन्दा प्राकृतिक तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सैद्धान्तिक, महिला र सृजिएका महिलाहरू र सृजिएका बच्चाहरूलाई जन्म दिन र बच्चाहरूलाई जन्म दिन। तर हामी लगातार गर्भवती छैनौं;) त्यसकारण, एक महिलाको शरीर आफैंलाई नयाँ अवस्थाको साथ मार्नै पर्छ। र यो, यो हुन्छ, धेरै रमाईलो संवेदनामा जानको लागि। पेटको तल मेसिन दुखाइ ...
नमस्कार! यो जस्तै, म सबै कुरा सहज छैन। तिनीहरू प्रख्यात अस्पतालबाट छुट्टिन्छन्। समय228 हप्ता अब। र दोस्रो दिनले पेटको तलको पेटको फेदमा दुखाइ हान्ने, कहिले काँही नाभी कटौती नजिक। आज, खाजामा, म पेटको तल काट्ने दुखाइको कारण उठाउन सकिनँ, म उठाउँथें। उनी हिंडे र पेटमा समातिन् र यसले कम्तिमा थोरैलाई मद्दत गर्यो। 20 मिनेटमा जान दिएन, अँध्यारोमा अँध्यारो भयो। ...
34 औं हप्ता गर्भावस्था भनेको बायाँ तर्फ पेटको तल एक तीव्र काट्ने दुखाइ हो, म रातमा यस दु: खबाट उठ्छु, म त्यसमा आक्रमण सुरु गर्न सक्छु। विशेष क्षेत्रलाई अस्पतालमा पठाइएको थियो, सबै विश्लेषणहरू फेला परेन पछि केहि पनि फेला परेन तर आक्रमणहरू मात्र श्रद्धांजनमा र अधिक श्रद्धालुहरू मात्र बृद्धि भएकी थियौं।
गर्भावस्थाको समयमा पेटको तलका कारणहरू: प्रारम्भिक र पछि मितिहरू काट्ने कारणहरू
भविष्यका आमाहरू अक्सर पेटमा दुखाइ र असुविधाको गुनासो गर्छन्। भावनाहरू फरक गतिशीलता हुन सक्छ - दुर्बलताबाट, थोरै झुकाव, धारिलो र धारिलो, जुन सहन गाह्रो छ। यो सामान्य हो जब कटौती एक वा धेरै दिन भित्र अवलोकन गरिन्छ? तिनीहरूसँग जोडिएको के हो र कसले चिकित्सा सल्लाहलाई सम्पर्क गर्न?
गर्भावस्थाको बखत पेटको तल दुखाइको दुखाइ दिनु वा पेटको तल दुखाइ दिनुहोस्:
गर्भावस्थाको समयमा पेटको तल दुखाइ आदर्श को एक विकल्प हुन सक्छ र जीवको पुनर्संरचनाको परिणाम हो (हामी गर्भावस्थामा के संवेदनशील छौं ?)। यसले बिरामीलाई जाँच्दा ओबस्टेट्सेन्ट्रिक-स्त्री रोग विशेषज्ञलाई पुष्टि गर्नुपर्दछ। उसले वर्णन गर्नेछ कि कुन कुराले असुविधा उत्पन्न गर्दछ, र भविष्यमा आमालाई शान्त पार्नेछ। शारीरिक कारणले बच्चालाई हानी गर्न सक्षम छैन। तिनीहरूको चरित्र ह्याचिंग, स्वास्थ्य राज्य र महिलाको पीडा संवेदनशीलताको थ्रेसोमा निर्भर गर्दछ।